Yakaderera stock yeApple Watch Series 5 | Ndinobva mac
Yakadzika stock Apple Watch Series 5
Nhasi izuva umo Prosser akayambira nezve kuvhurwa kwezvigadzirwa zvitsva zvinosanganisira iyo iPad Mhepo uye neApple Watch Series 6, nepo kune rimwe divi iyo Twitter account yaL0vetodream naMark Gurman iye, akayambira kuti hatizove nemidziyo mitsva. Izvi zvinogona kuonwa kubva masikati kana nguva dzemanheru pano munyika medu, tichaona kuti ndiani ari pachokwadi panyaya iyi uye ndiko kunetsekana kunofemerwa munharaunda.
Ipo izvi zvichiitika online, paApple webhusaiti munyika medu tinozviziva izvozvo stock yeApple Watch Series 5 iri kushomeka mumamodeli akati wandei online uye muchitoro, Kune akawanda acho ane kushomeka kwemasheya uye zvinogona kunge izvo kuti mawatch eApple ane chinhu chitsva munguva pfupi, hongu, hatizive kuti riini.
Parizvino kana tichiwana kumisikidzwa kwakasiyana-siyana kweApple Watch Series 5 tinowana kushomeka kwemasheya muchitoro nepamhepo, hazvigone kutengwa chaiko. Ichi chiratidzo chinoratidza kuti chimwe chinhu chitsva chiri kuuya uye zvine musoro tinogona kufunga kuti kuvandudzwa kwave pedyo. Nhasi Apple inogona kutaura zuva repamutemo rehurukuroNgatitumirei "kokero" neimwe nzira yekuona chiitiko cheiyo nyowani iPhone 12 uye pamwe neApple Watch Series 6 online.
Ivai chero zvazvingava, isu tiri ne "iyo hype" kuburikidza nedenga mushure maawa mashoma eguhwa rakanyanya pamusoro pekugona kusvika kwezvigadzirwa zvitsva nhasi pawebhusaiti yeApple. Tichaona zvinoitika uye pamusoro pezvose isu tichaona zvinoitika ne stock ye Aya maApple Watch Series 5 ayo anozove anotevera kutsakatika kubva muchigadzirwa katalog kubva kuCompertino firm.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakadzika stock Apple Watch Series 5
LG inozivisa kuti ichagadzirisa 2018 mamodheru nerutsigiro rweAirPlay 2 uye HomeKit
Juuk Chiedza Tambo yeApple Watch: yakajeka uye ine aluminium kupera